Ukuzingela – Buza Noma Yini
Solved1.68K views January 14, 2021 General
Mabuza1.01K	 January 14, 2021 0 Comments
Bengifisa ukwazi ukuthi ukuzingela kwenziwa obani, nini futhi ngasiphi isizathu?
admin Selected answer as best January 14, 2021
uchwepheshe361	 Posted January 14, 2021	 0 Comments
Ukuzingela bekungumdlalo futhi kuyigugu kithina’ndlu empisholo. Inhloso yokuzingela kwabanye bekuwumdlalo njengoba bese ngishilo futhi bekuwumdlalo onemfundiso, kanti kwabanye bekungukuxosha ikati eziko. Ukuzingela bekungasikho ukumosha izinyamazane ngoba bekunanemithetho yokuzingela ukuze kugwenywe ukuphela kwezinyamazane.
Lapha ekuzingeleni ufunda lukhulu ngoba uthola izilwane ezahlukahlukene nangendlela eziphila ngayo. Uphinde ufunde nangendlela ezizivikela ngayo ezitheni njengoba kukhona eziphila ngejubane bese kubakhona eziphila ngamasu athile ukuze zizivikele, lezi zamasu ezingakwazi ukubaleka zivikela nje ngedlela ezidaleke ngayo bese kubakhona ezizivikela ngokulwa lezo ke imvamisa ziyingozi.
Kodwa zonke lezilwane inja ezingelayo iyakwazi ukubhekana nazo ngokwehlukana kwazo. Ukuzingela uyazingela ngawedwana kuphinde futhi kubekhona inqina okungabantu abaningi abazingelayo. Ukuzingela kuqinisakakhulu ubudlelwane phakathi komuntu nenja yakhe ngoba bayakwazi ukuxoxa bezwane nje kahle. Zazivikelwake futhi izinyamazane ukuze zingapheli ngakhoke kwakuba kwakuba nesikhathi sokuphuma inqina, kepha loyo ozama ukuxosha ikati eziko yena wayengazingela ngayedwana noma ngabe inino uma ethanda ngoba phela wayengeke aziqede eyedwa vele. Into eyayingaqeda izinyamazane ukuphuma iqina njalo ngoba iqina yibutho lamaphisi.
Kwakungazingelwa ngalesikhathi izinyamazane zisamithi noma zisakhulisa amazinyane zazilindwa zize ziqede. Amaphisi ayesazi isikhathi seqina kwazise ayeyiqonda impilo yezinyamazane ukuthi zizala nini zikhulise kanjani, njalo njalo.
Kwakubalulekile kakhulu ke ukuzingela ngoba isizwe sakithi sasibuka indlela izilwane eziphila ngoyo kanye nemikhuba yazo lokho kwakubasiza abantu ekutheni bazi/baqonde ukuthi uma bengasebenzisa isilwane esithi kungenzeka ukuthi.
Izilwane ziyayihlobisa imvelo futhi ziyalunothisa ulwimi lwethu kanti futhu ziyelapha kusinde abantu yingakho kwakubalulekile ukuba noma kuzingelwa kodwa zingabulawa isinoma ikanjani.